Super Mario Run dia manohy manapaka ireo firaketana fampidinana | Vaovao IPhone
Tsy azo iadian-kevitra mihitsy ny tranga Super Mario Run. Izahay dia miatrika ny fisehoan'ny plumber malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'ny finday. Ny fisehoany teo amin'ny iOS dia nahatonga ny olon-drehetra ho lasa adala tamin'ny fisintomana ny lalao, na izany aza, toa ny tsy fantatry ny maro dia ny hoe mila mamaky ilay boaty izy ireo raha te ho afaka hilalao ny ambaratonga rehetra an'ny Super Mario Run , izay nalamina tamina isa tsy dia tsara loatra tamin'ny fanamarihana iOS App Store. Etsy ankilany, ny fahombiazana dia tsy azo afenina, ary izany no izy Super Mario Run no lalao nahatratra 25 tapitrisa ny fampidinana voalohany indrindra.
Tamin'ny 15 Desambra, nametraka ny fototra izy, ny mpandalina ny Tower of Sensor namintina fa nahatratra ny Super Mario Run Fampidinana 25 tapitrisa ao anatin'ny efatra andro monja, fahombiazana iray izay nitondra Pokémon Go tsy latsaky ny 11 andro, raha toa ka nisy lozam-pifamoivoizana iray toa an'i Clash Royal tsy maintsy niandry 12 andro vao nahatratra ilay tarehimarika mitovy. Ny olana anefa dia ny ankamaroan'ireo mpampiasa nampidina azy io dia tsy mieritreritra ny handalo ilay boaty mba handoavana ny lalao feno.
Tsy misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny lalao izy ireo, hoy ny hevitr'izy ireo Reuters, fa noho ny zava-misy fa tototry ny lalao maimaimpoana ny tsena izay tsy manery ny mpampiasa handany 10 euros. Ny tena zava-misy dia eo amin'ny lalao miaraka amin'ny vidiny mandrara isika, tsy miresaka momba € 1,99 na € 3,99 akory isika, ny fividianana ao anaty app dia mitentina hatramin'ny 9,99 €, izay mety ho sakana tsy tian'izy ireo resena.
Raha ny fahitana azy dia mahafinaritra ny lalao, ao amin'ny Actualidad iPhone dia efa nanandrana azy mafy isika, saingy tsy isalasalana fa toa tsy lalao izay mendrika handoavana mihoatra ny 3,99 €, na dia amin'ny fankatoavan'ny Nintendo aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Super Mario Run dia manohy manapaka ireo firaketana fampidinana